KHRISO: Madaxweyne Farmaajo iyo R/wasaaraha Ethiopia oo Heshiis Xasaasi ah ku gaaray Adis Ababa (Sawirro) – Xeernews24
KHRISO: Madaxweyne Farmaajo iyo R/wasaaraha Ethiopia oo Heshiis Xasaasi ah ku gaaray Adis Ababa (Sawirro)
4. Mai 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Qodobada Kasoo baxay Shirka Waxaa kamid ah
1- Booqashada ayaa aheyd in la xoojiyo xariirka udhaxeeya hogaanka cusub ee Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya iyo in labada dal ay yeeshaan xariir toos ah, iyadadoo wadahadalka labada dhinac uu bilowday kadib booqashadii Ra’isul wasaaraha Itoobiya ee Muqdisho iyo kulankii ay isku arkeen Nairobi ee arimaha qaxootiga
2- In Labada hoggaamiye ay isku raaceen in la Abuuran xiriir dhow oo ku salaysan mabaadi’da deris-wanaagga, is xushmayn iyo horumarinta danaha labada dhinac.
3 – Labada Masuul ayaa dhanka kale isku raacay in la xaqiijiyo in labada dal ay u baahan yihiin in ay iskaashi dhaqaale oo xoog leh sameystaan. Iyadoo la raacayo baahida loo qabo in la dhiiri geliyo dhaqdhaqaaqa xorta ah ee ganacsiga iyo adeegyada u dhexeeya shacabka labada dal.
4- In Ra’isul wasaaraha Itoobiya H.E. Hailemariam Dessalegn uu ugu hambalyeeyay H.E. Madaxweyne Mohamed Abdullahi Mohamed guulishii uu dhawaan sida cajiibka ah ugu noqday uga soo hooyay doorashadii dhacday isla markaana uu si nabad ah kula wareegay xafisikiisa.
5- Ra’isul wasaaraha Itoobiya ayaa dhanka kale sheegay iney ka go’an tahay iney la dagaalanka AlShabaab iyo ka qeyb qaadashada amaanka Soomaaliya.
6- Labada hogaamiye waxa ay muujiyeen walaacooda ku saabsan soo laabashada burcad badeedda ee Badweynta Hindiya iyo iney beesha caalamka ay ku dadaalaan sidii loo laba jibaari lahaa in lala dagaalamo kooxahaas, sidoo kalana dowladda Soomaaliya laga taageero sharciga xakameynta falal dambiyeedyada ka dhaca xeebaha.
7- Labada Hogaamiye waxaa ay sheegeen sida ay uga xun yihiin abaaraha ka jira Soomaaliya iyo Itoobiya sidoo kalana ay ku baaqayaan in la badiyo gar-gaarka.
8- Labada Masuul waxaa ay si gooni ah uga hadleen waxa laga filan karo shirka magaaladda London ee arimaha Soomaaliya, kaas oo ay dowladaha wadamada IGAD ka qeyb gali doonaan.
Ugu dambeyn, madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay sida ay dowladda Itoobiya ugu soo dhaweysay magaaladda Adis Ababa, waxaana uu sheegay inuu muhiimada saari doono sidii xariirka labada dal uu unoqon lahaa mid guuleysta.
Ra’isul wasaaraha Itoobiya ayaa ugu dambeyn dhankiisa sheegay inuu uga mahadcelinayo Madaxweyne Farmaajo sida uu u aqbalay casuumaada uu ku yimid magaaladda Adis Ababa.
Kulanka labada dhinac ayaa kusoo dhamaaday guul iyadoo madaxweyne Farmaajo uu soo gaba gabeynayo socdaalkii uu ku tagay Itoobiya
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/05/farmajo-desalegn1.jpg 427 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-05-04 00:56:232017-05-04 00:56:23KHRISO: Madaxweyne Farmaajo iyo R/wasaaraha Ethiopia oo Heshiis Xasaasi ah ku gaaray Adis Ababa (Sawirro)
Madaxweyne Farmaajo oo si weyn loogu soo dhoweeyay Addis Ababa iyo Ina Iley... Siyaasi Rayaale Xaamuud oo Hadal Guubaabo ah ka jeediyey Shirkii Bristol.